Sidee Soomaalidu uga qeyb qaadan kartaa go’doominta Xisbiga cunsuriga (SD): Doorka dhalinyarada | Somaliska
Waxay dhawaan isbahaysiga talada haya iyo xisbiga deegaanka (Miljöpartiet) oo codkiisa aalaaba la dhinac istaaga xukumadda ay ku hishiiyeen dhawr qodob, oo ay ugu muhiimsanayd fududeynta qoysaska kala maqan iyo in aan wax aqoonsi ah oo dhacaanka DNA dhaafsiisan aan shardi looga dhigin mideyntooda. Dawladu waxay si cad madashii hishiiskaas lagu gaaray oga sheegtay in arimo bani’aadanimo ka sakow heshiiskaas ujeedadiisa ugu weyn ahayd in lagu go’doomiyo xisbiyada siyaasadoodu ku saleysantahay cunsuriyada iyo Islaam-naceybka, Sverigedomokaratarna (SD). Dhanka kale hogaamiyaha xisbiga midigta fog Jimmie Åkesson, oo ah nin aan la gabban naceybka uu u qabo Soomaalida kuna caan baxay aragtidiisa muran dhaliska ah ee ku aadan guud ahaan qaxootiga gaar ahaan kuwa afrikan-ka ah iyo ka soo jeeda dunida islaamka, lama aanu soo daahin cambaarayntiisa arintaan ku saabsan wuxuuna xisbiga deegaanka ku sifeeyey xisbi mintid ah oo ku talaxtagay u gacan furnaanta qaxootiga. Hadaba kaalin intee le’eg ayaa oga banaan go’doominta xisbigaan bulshada Soomaaliyeed, oo ah bulshada waxa kasta oo ay soo galootiga ku dhaliilayaan madnayaasha xisbigaan baarlamaanka ugu jira tusaalaha ugu soo qaataan ? Hadiise kaaline uga banaantahay, wadadee ugu wanaagsan oo aan u mari karnaa iska qabashada xisbigaan cunsuriga ah? Qaybse ma ku leenahay sababta dhalisay in dhalinyaro fara badan oo Swedish ah xagjirada u xereysteen, si hagar la’aan ahna hiil iyo hooba iskula garabtaagaan xisbi kaligi jeete ah SD? Su’aalahaas iyo kuwa kalaba waxaan jawaabtooda ku eegeynaa qoraalo isdaba joog ah oo aan oga gol-leenahay hakinta isir-nacaybka iyo cunsuriyada, waxaan ugu soo horayn doonaa``Doorka dhalinyarada``. Doorka dhalinyarada Markii dib loogu laabto taariikhda Soomaalida dhallinyaradu waxay hormuud u ahaayeen halgankii shacbiga Soomaaliyeed u galay iska rogidii heeryadii duliga gumaysiga waxayna taaba galiyeen xisbigii wanaaga ugu badan looga hayo Soomaaliya looguna jeclaa bari, SYL, si taasi lamid ahna waxay libin oga soo hooyeen dhinaca diinta kaalin fir-fircoon ayeyna ka qaateen in dacwada islaamka ku faafto dhamaanba gayiga Soomaaliyeed. Sanadadii dambe Laakinn sanadadii dambe dhalinyaradu waxay noqdeen dhangadii lagu garaacayey umadooda waxayna si toos ah laf-dhabar ugu noqdeen rabshada iyo magaic xumida u soo hoyatay shacbiga Soomaaliyeed, taas oo lagu macnayn karo dhibaatooyinka faraha badan oo haysta dhalinyarada, sida shaqo la’aanta iyo aqoon yarida. Fursadaha jirah Dhilinyarada Soomaaliyeed ee ku nool wadanka Sweden iyo dhamaanba wadamada nabadu ka jirto waxay haystaan fursado dahabi ah oo ay markale kur ugu soo qaadi karaan sumcadii iyo maqaamkii ay dhalinyaradu ku dhexlehaan jirtay bulashadeeda, waxayna hasytaan fursado Waxbarasho, shaqo, caafimaad,amni, iyo in ay si xor ah u fakaraan, inkasta oo amni iyo xornimo aadan wadan kaagii ku haysan kuugu dhadhameyn si wanaagsan. Caqabadaha iyo dabinada Hadaba waa in dhalinyaradu dhinac iska dhigto khilaafaadka iyo is jiid-jiidka u dhexeeya jiilkii naga horeeye iskuna diyaariyaan ka faa’iideysiga fursadaahaas. Dhalinyaradu waa in ay si taxadar badan ugu istaagaan hagaajinta iyo hogaaminta guudahaanba danaha umadooda gaar ahaan jaaliyada Soomaaliyeed oo dabada ku hogaanka beeshay ayaga oo ka faa’iideysanaya xurmeynayana nidaamka dawliga ah oo ay ku hoos noolyihiin kaas oo u suurtagaliyey in ay si xornimo ah danahooda oga fakaraan. Waa in si aan kala har lahayn da’yartu ugu wada hortagtaa marin habaabinta dhalinyarada Soomaaliyeed geedkii la doonaba haloogu soo ganbadee, waana in ay ka digtoonaadaan dabinka loo maleegayo oo ah in isku baraash lamaro kuwa toosan iyo kuwa xunba, sidaasna lagu cuuryaamiyo dadkii bulshada wax galka u ahaa. Duruusta cadawga iyo qaabilaadiisa Waxay dhalinyaradeenu cashar ka baran karaan xisbiga cunsuriga ah,SD oo hogaankiisa iyo intabadan xubnaha xisbiguba yihiin dhalinyaro ka gadooday soogalootiga iyo muslimiinta ku soo badanaysa wadankooda. Waa in dhalinyaradeenu arintaas kala hortagtaa wanaag iyo wax wada qabsi, si aan bulshada inteeda kale u tusno in aanan ahayn dad wadankooda iyo khayraadkooda dhibaato ku ah, ee aan nahay bulsho wax wada qabsi iyo wada noolaashiyaba u diyaar ah, taasna waxay u baahantahay dhalinyaradeena oo doorkooda qaadata. Hadiise taas la waayo waxaan si dadban u noqonaynaa taageerayaasha axsaabta mayalka adag ee cusnsuriyiinta ah waayo waxaa run noqonaya oo daliilna ay u helayaan doodooda guracan, oo ah in aan nahay dad aan fahansanayn macnaha noloshaba, taasina waxay horseedi doontaa in loo arko axsaab wadaniyiin ah aadna loo jeclaado sida hadaba jirta. Saciid Cabdi Cusman Somaliska.com Uppsala
Waxay dhawaan isbahaysiga talada haya iyo xisbiga deegaanka (Miljöpartiet) oo codkiisa aalaaba la dhinac istaaga xukumadda ay ku hishiiyeen dhawr qodob, oo ay ugu muhiimsanayd fududeynta qoysaska kala maqan iyo in aan wax aqoonsi ah oo dhacaanka DNA dhaafsiisan aan shardi looga dhigin mideyntooda.
Dawladu waxay si cad madashii hishiiskaas lagu gaaray oga sheegtay in arimo bani’aadanimo ka sakow heshiiskaas ujeedadiisa ugu weyn ahayd in lagu go’doomiyo xisbiyada siyaasadoodu ku saleysantahay cunsuriyada iyo Islaam-naceybka, Sverigedomokaratarna (SD).
Dhanka kale hogaamiyaha xisbiga midigta fog Jimmie Åkesson, oo ah nin aan la gabban naceybka uu u qabo Soomaalida kuna caan baxay aragtidiisa muran dhaliska ah ee ku aadan guud ahaan qaxootiga gaar ahaan kuwa afrikan-ka ah iyo ka soo jeeda dunida islaamka, lama aanu soo daahin cambaarayntiisa arintaan ku saabsan wuxuuna xisbiga deegaanka ku sifeeyey xisbi mintid ah oo ku talaxtagay u gacan furnaanta qaxootiga.
Hadaba kaalin intee le’eg ayaa oga banaan go’doominta xisbigaan bulshada Soomaaliyeed, oo ah bulshada waxa kasta oo ay soo galootiga ku dhaliilayaan madnayaasha xisbigaan baarlamaanka ugu jira tusaalaha ugu soo qaataan ?
Hadiise kaaline uga banaantahay, wadadee ugu wanaagsan oo aan u mari karnaa iska qabashada xisbigaan cunsuriga ah?
Qaybse ma ku leenahay sababta dhalisay in dhalinyaro fara badan oo Swedish ah xagjirada u xereysteen, si hagar la’aan ahna hiil iyo hooba iskula garabtaagaan xisbi kaligi jeete ah SD?
Su’aalahaas iyo kuwa kalaba waxaan jawaabtooda ku eegeynaa qoraalo isdaba joog ah oo aan oga gol-leenahay hakinta isir-nacaybka iyo cunsuriyada, waxaan ugu soo horayn doonaa“Doorka dhalinyarada“.
Markii dib loogu laabto taariikhda Soomaalida dhallinyaradu waxay hormuud u ahaayeen halgankii shacbiga Soomaaliyeed u galay iska rogidii heeryadii duliga gumaysiga waxayna taaba galiyeen xisbigii wanaaga ugu badan looga hayo Soomaaliya looguna jeclaa bari, SYL, si taasi lamid ahna waxay libin oga soo hooyeen dhinaca diinta kaalin fir-fircoon ayeyna ka qaateen in dacwada islaamka ku faafto dhamaanba gayiga Soomaaliyeed.
Laakinn sanadadii dambe dhalinyaradu waxay noqdeen dhangadii lagu garaacayey umadooda waxayna si toos ah laf-dhabar ugu noqdeen rabshada iyo magaic xumida u soo hoyatay shacbiga Soomaaliyeed, taas oo lagu macnayn karo dhibaatooyinka faraha badan oo haysta dhalinyarada, sida shaqo la’aanta iyo aqoon yarida.
Dhilinyarada Soomaaliyeed ee ku nool wadanka Sweden iyo dhamaanba wadamada nabadu ka jirto waxay haystaan fursado dahabi ah oo ay markale kur ugu soo qaadi karaan sumcadii iyo maqaamkii ay dhalinyaradu ku dhexlehaan jirtay bulashadeeda, waxayna hasytaan fursado Waxbarasho, shaqo, caafimaad,amni, iyo in ay si xor ah u fakaraan, inkasta oo amni iyo xornimo aadan wadan kaagii ku haysan kuugu dhadhameyn si wanaagsan.
Caqabadaha iyo dabinada
Hadaba waa in dhalinyaradu dhinac iska dhigto khilaafaadka iyo is jiid-jiidka u dhexeeya jiilkii naga horeeye iskuna diyaariyaan ka faa’iideysiga fursadaahaas. Dhalinyaradu waa in ay si taxadar badan ugu istaagaan hagaajinta iyo hogaaminta guudahaanba danaha umadooda gaar ahaan jaaliyada Soomaaliyeed oo dabada ku hogaanka beeshay ayaga oo ka faa’iideysanaya xurmeynayana nidaamka dawliga ah oo ay ku hoos noolyihiin kaas oo u suurtagaliyey in ay si xornimo ah danahooda oga fakaraan.
Waa in si aan kala har lahayn da’yartu ugu wada hortagtaa marin habaabinta dhalinyarada Soomaaliyeed geedkii la doonaba haloogu soo ganbadee, waana in ay ka digtoonaadaan dabinka loo maleegayo oo ah in isku baraash lamaro kuwa toosan iyo kuwa xunba, sidaasna lagu cuuryaamiyo dadkii bulshada wax galka u ahaa.
Duruusta cadawga iyo qaabilaadiisa
Waxay dhalinyaradeenu cashar ka baran karaan xisbiga cunsuriga ah,SD oo hogaankiisa iyo intabadan xubnaha xisbiguba yihiin dhalinyaro ka gadooday soogalootiga iyo muslimiinta ku soo badanaysa wadankooda.
Waa in dhalinyaradeenu arintaas kala hortagtaa wanaag iyo wax wada qabsi, si aan bulshada inteeda kale u tusno in aanan ahayn dad wadankooda iyo khayraadkooda dhibaato ku ah, ee aan nahay bulsho wax wada qabsi iyo wada noolaashiyaba u diyaar ah, taasna waxay u baahantahay dhalinyaradeena oo doorkooda qaadata.
Hadiise taas la waayo waxaan si dadban u noqonaynaa taageerayaasha axsaabta mayalka adag ee cusnsuriyiinta ah waayo waxaa run noqonaya oo daliilna ay u helayaan doodooda guracan, oo ah in aan nahay dad aan fahansanayn macnaha noloshaba, taasina waxay horseedi doontaa in loo arko axsaab wadaniyiin ah aadna loo jeclaado sida hadaba jirta.
Aad ayaad u mahadsantahay Saciid. Runtii waa mowduuc qiimo badan oo aadna muhiim u ah. Inta aan raadinayo wararka quseeya Soomaalida Sweden waxaan maalinkasta ku dhex dhacaa warar niyada iga jabiya oo lagu aflagaadeynayo Soomaalida Sweden, ama lagu muujinayo isku xirnaan la’aantooda.
Waxaan noqonay Romada cusub (Roma waa bulsho Yurub ku nool oo ay dadka kale bahdilaan) balse hada Sweden anaga ayaa Romada ka liidana, runtiina waa boos anagu aan is dhignay. Aad ayay u muhiim u tahay in ay Soomaalida khilaafkooda meel iska dhigaan oo ay fahmaan in aan 1 umad nahay oo keena xun waxa uu soo jiido keena fiican saameyneyso. Marka inteena fiican waxaa muhiim ah in aan bilowno olale aan ku wanaajineyno muuqaalka bulshadeena.
walal keen siciid aad ayuu umahad sanyahay waa arin meesha ku jirta oo doqon magarato ah sideedaba somalida sweden aad ayaa in dhaha logu hayaa waayo waxaan ilaa hada lagaranayn mabda,a soomalida sweden marmar waxaaba moodaa inay u dhaqmayaan sidii markii aan joognay wadan keenii hooyo hadaba intii aan inagu mid mid isu eegi lahayn aan indhaha ku eegno cadawgeena kowaad
sida uu walal keen siciid sheegay waxa jira duleela badan oo bulshada somaliyeed ee sweden ku nool ay leeyihiin oo dadka sogalootiga necebi tusaale usoo qadan karaan taas ma is weydiiney sidii aan uga bad baadi lahayn
aniga fikir ahaan waxaan qaba inaan sameeyno olole balaaran oo aan ku muu jinayno inaan nahay dad jira oo iyagana wax istari kara wadanka ay ku nool yihiina wax tari kara oo aan ka muuqano bulshada ku nool wadankan si ay mesha uga baxdo tusalaha ay inagu soo qadanayaan cadowgeenu
waxan qabaa inaan gobol walba oo sweden ka tirsan kasameyno urur dhalin yaro oo isu taaga sidii xal looheli lahaa bulsha midaysan oo huruu socod leh
inan hadalo waxaa ka roon inaan ku dhaqaaqno ficilka dhabta ah sida ugu dhaqsaha badan
A/C JImcaale sxb horaa loo yirir laxdo maheey isdhigto ayaa lagu bireyaa mase adugu geley ad tahay geel an kugu so hal qabasahaa i alla fall sxb somalida ayuka maha is dhigay 1000 qoff maheey kujoogaa waxaaka roon 4-qof oo qowmiyadaha kale waxan ula jeda kama muuqano umada an lanool yahay saas aw uga dhax faidestay xisbiga -SD,, waxana kale oo lasoo ogaaday waxa u codeeyay ee 5-6 gaarsiiyay ineey yihiin ajaanib kale oo rabo iney nagu so hubeyaan si aw u si baddto naceybka aw noqabo Ábkoow Jimme asc